प्रतिज्ञाको प्रबन्ध – Word of Truth, Nepal
त्यसबेलादेखि निम्नहरू सित परमेश्वरले विशेष प्रकारले व्यवहार गर्न थाल्नुभयो…
अब्राहामको बोलावटको विवरण उत्पत्ति अध्याय १२ मा पाउँछौं। उत्पत्ति १२:१ मा परमेश्वरले अब्राहामलाई उनी बसोबास गरिरहेका भूमि (उनको घर, परिवार, समाज, मित्रहरू) बाट अर्को नयाँ भूमिमा जानलाई बोलाउनुभएको कुरा पढ्छौं, “जुन ________ म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा।” यो सजिलो काम थिएन। तपाईंलाई आफ्नो घर, आफ्नो देश, आफ्ना आफन्त, आफ्ना मित्रगणलाई छोडेर आफूले कहिल्यै नदेखेको देशमा जान भनिएको भए के त्यसो गर्न तपाईंलाई सजिलो लाग्थ्यो होला?
बाइबलले अब्राहामको परिवारको बारेमा धेरै बताउँदैन तर यहोशू २४:२ मा अब्राहामका बाबु तेरह (उत्पत्ति ११:२७) को बारेमा हामी केही जानकारी पाउँछौं। तेरहले “______ _________हरू पुज्दथे” (यहोशू २४:२ को आखिरी भागमा हेर्नुहोस्)। अब्राहामका परिवारले एकमात्र जीवित र साँचो परमेश्वरलाई पुज्दैनथे। तिनीहरू मूर्तिपूजकहरू थिए। तिनीहरूले अस्तित्वहीन झूटा देवदेवीहरूको सेवा गर्दथे। अब्राहामका परिवार एउटा झूटा धर्ममा संलग्न थिए अनि परमेश्वरले अब्राहामलाई त्यसदेखि बाहिर बोलाउनुभयो। के आज पनि परमेश्वर मानिसहरूलाई झूटा धर्महरूबाट बाहिर निकाल्न चाहनुहुन्छ (१ थेस्सलोनिकी १:९)? ___________________।
उत्पत्ति १२:२-३ मा परमेश्वरले अब्राहामलाई अति सुन्दर प्रतिज्ञाहरू दिनुभयो। त्यसबेलासम्ममा परमेश्वरले यस्ता प्रतिज्ञाहरू पृथ्वीका कुनै मानिसलाई दिनुभएको थिएन। यी प्रतिज्ञाहरू अति विशेष थिए जुन प्रतिज्ञाहरूलाई परमेश्वरले अब्राहाम र अब्राहामका सन्तानहरूलाई दिनुभयो। उत्पत्ति १२:२-३ मा परमेश्वरले कति पटक “गर्नेछु” वा “दिनेछु” वा “गराउनेछु” भन्नुभयो? _______। प्रतिज्ञा गर्नु भनेको “म केही गर्नेछु” वा “म गर्नेछैनँ” भन्ने वचन दिनु हो। यी पदहरूमा अब्राहामका निम्ति आफूले केही गरिदिनेछु भनी परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुभयो। यी प्रतिज्ञाहरूको बारेमा विचार गरौं:
अब्राहामलाई दिइएका परमेश्वरका सुन्दर प्रतिज्ञाहरू उत्पत्ति १७:५-८ मा पान्छन्। यी पदहरूमा परमेश्वरले अब्राहामलाई प्रतिज्ञा गर्दै “तुल्याउनेछु” वा “बनाउनेछु” वा “गर्नेछु” वा “दिनेछु” वा “हुनेछु” जम्मा कति पटक भन्नुभयो? _________। उत्पत्ति १७:८ मा अब्राहाम र अब्राहामको सन्तानसित परमेश्वरले एउटा अति विशेष सम्बन्ध राख्‍ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको पाइन्छ, “म _______________ ____________ हुनेछु।”
परमेश्वरले अब्राहाम, इसहाक र याकूबका हातमा ज्यादै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू राखिदिनुभएको थियो। मानिसले परमेश्वरबाट जब प्रतिज्ञा प्राप्‍त गर्दछ तब उसको जिम्मेवारी के हुन्छ? उसको जिम्मेवारी यो हुन्छ, विश्वास गर्नु! परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभयो भने मानिसले उक्त प्रतिज्ञालाई पक्रनुपर्छ, त्यसलाई अँगाल्नुपर्छ, त्यसलाई बलियो गरी समाउनुपर्छ अनि विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो सत्य छ (हिब्रू ११:१३ पढ्नुहोस्)। उसले भन्नुपर्छ, “परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हो यो, यो म विश्वास गर्छु।” विश्वास भनेको परमेश्वरलाई उहाँको मुखको वचनको आधारमै मान्नु हो। परमेश्वरले जे गर्नेछु भन्नुभएको छ ठीक त्यही गर्नुहुनेछ भनी सीधै मानिलिनु नै विश्वास हो।
अब्राहामको विश्वास उत्पत्ति १५:५-६ मा देखिन्छ। आकाशमा झलमल्ल ताराहरू देखिने एउटा रातको कुरा हो, परमेश्वरले अब्राहामलाई “यदि तारा गन्न सक्छस् भने गनिहेर्” भन्नुभयो (पद ५)। अब्राहामले त्यसो गर्न सके होलान्? ____________। सृष्टिमा अनगिन्ति ताराहरू छन्। जति नियालेर हेर्‍यो (विशाल दूरदर्शक यन्त्रहरूले किन नहोस्) त्यति नै धेरै ताराहरू भेटिन्छन्। ताराहरू यति धेरै छन् कि तिनीहरूलाई गन्नै सकिन्न! तब परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, “तेरा ______________ पनि त्यस्तै हुनेछन् (पद ५।”
परमेश्वरको प्रतिज्ञा दिइएको व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो, सो देखाउन परमेश्वरले अब्राहामलाई नमुनास्वरूप प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीले अब्राहामले जस्तै परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यहूदी वा अन्यजाति प्रत्येकले नै अब्राहामले जस्तै परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। प्रत्येक मानिसलाई दिइएको जिम्मेवारी यो हो, उसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ, ऊसँग अब्राहामको विश्वास हुनुपर्छ जो “उहाँले जे ____________ गर्नुभएको छ, सो पूरा गर्नालाई उहाँ __________ पनि हुनुहुन्छ भनी उनी पूरा ____________मा रहे” (रोमी ४:२१)।
साथै आशिषको स्थानमा रहिरहनु पनि आवश्यक थियो। उत्पत्ति २६:३ मा परमेश्वरले इसहाकलाई भन्नुभयो, “त्यही _________मा बसोबास गर्, र म तँसँग रहनेछु।” इसहाकलाई ______ देश नजान आज्ञा दिइएको थियो (उत्पत्ति २६:२)। प्रतिज्ञाको देश (प्यालेस्टाइनको भूमि) नै आशिषको देश थियो। जब जब इस्राएलका सन्तानहरू प्रतिज्ञाको देशबाहिर जान्थे तब तब उनीहरू प्रायः समस्यामा पर्नेगर्थे, जसरी उनीहरू मिश्रदेशमा कमारा-कमारीहरू बने र बेबिलोनमा प्रवासीहरू बने। परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा ज्यादै विशेष भूमि दिनुभएको थियो र उनीहरू यही भूमिमा रहनुपर्थ्यो र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दै उहाँको सेवा गर्नुपर्थ्यो!
अब्राहाम विश्वासका मानिस (विश्वासमा जिउने मानिस) थिए (उत्पत्ति १५:६), तर त्यस्ता समयहरू पनि आए जब उनलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्न गाह्रो भयो। जस्तै, उत्पत्ति १६ अध्यायमा, परमेश्वरले उनकी पत्‍नी सराईद्वारा सन्तान दिन सक्नुहुन्छ भनेर उनले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सकेनन्। त्यसैले उनले सराईकी दासी हागारद्वारा सन्तान जन्माए। आफ्नी पत्‍नीको सल्लाहलाई सुन्नुको सट्टा (पद २), अब्राहामले यसरी भन्नुपर्नेथ्यो, “सराई, परमेश्वरले हामीलाई सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी वृद्ध भइसकेका छौं र अहिलेसम्म हाम्रो सन्तान भएको छैन, तरैपनि परमेश्वरले आफ्नो वचन पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ! उहाँको निम्ति कुनै कुरा औधी कठिन छैन!”
एसाव र याकूब जन्मनुभन्दा अघि याकूब (“कान्छो”) ले उहाँको आशिष पाउनेछ भनी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो (उत्पत्ति २५:२१-२३)। तर इसहाकले आफ्नो अर्कोचाहिँ छोरा एसावलाई बढी माया गरे (उत्पत्ति २५:२८)। इसहाकले कुनचाहिँ छोरालाई आशिष दिने निर्णय गरे (उत्पत्ति २७:१-४)? _________________। परमेश्वरले “म याकूबलाई आशिष दिनेछु” भन्नुभएको थियो तर इसहाकले परमेश्वरको वचनलाई काट्दै भन्छन्, “म एसावलाई आशिष दिनेछु!” परमेश्वरलाई उहाँको वचनकै आधारमा मान्नु (विश्वास गर्नु) को सट्टा इसहाकले परमेश्वरको वचनलाई काट्दै थिए (अविश्वास गर्दैथिए)। आखिरमा यस्तो भयो, इसहाकलाई छल गरियो अनि पत्तै नपाई इसहाकले याकूबलाई आशिष दिए! यो कुरा अन्तमा इसहाकले थाह पाएपछि उनले परमेश्वरलाई खण्डन गर्न छाडे र परमेश्वरसित सहमत भए, “हो, त्यो (याकूब) चाहिँ आशीर्वादी हुनेछ (उत्पत्ति २७:३३)।” परमेश्वरले “म याकूबलाई आशिष दिनेछु!” भन्नुभएको थियो अनि इसहाक अन्तमा सहमत भए र भने, “याकूब आशिषित हुनेछ!” विश्वासको मानिस परमेश्वरको वचनसित सहमत हुन्छ र उसले परमेश्वरको वचनलाई काट्दैन (हिब्रू ११:२० पढ्नुहोस्।
पटक-पटक परमेश्वरले याकूबलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो (उत्पत्ति २८:१३-१५; ३२:२४-२९; ३५:९-१२)। तर त्यस्ता समयहरू आए जब याकूबले परमेश्वरको आशिष साँच्ची नै आफूमाथि हुनेछ भनेर विश्वास गर्न सकेनन्। उत्पत्ति ४२:३६ पढ्नुहोस्। याकूब त्यतिखेर वृद्ध भइसकेका थिए। आफ्नो प्रिय छोरो यूसुफ मरिसकेका छन् भन्ने उनलाई लाग्थ्यो (उत्पत्ति ३७:३१-३५ सित तुलना गर्नुहोस्)। आफ्नो छोरो बिन्यामीनलाई पनि गुमाउनेछु होला भन्ने उनलाई लाग्दैथ्यो अनि अर्को छोरा सिमियोनलाई कहिल्यै देख्न पाउँदिनँ भन्ने पनि उनलाई लाग्दैथ्यो। निराश भई याकूब विलाप गर्छन्, “यी सबै घटना __________ _______ (मेरो विरुद्धमा) आएको छ” (उत्पत्ति ४२:३६)। परमेश्वरको आशिष आफूमाथि छ भनी विश्वास गर्नुको सट्टा उनले आफूमाथि परमेश्वरकै सराप लागेको छ भन्ने जस्तै व्यवहार गर्दैथिए याकूबले!
आफू कहाँसम्म गलत रहेछु भन्ने कुरा याकूबले केही समयपछि थाह पाए। परमेश्वरले आफ्नो सुन्दर योजनाअनुसार काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि याकूबले आफ्ना सबै छोराहरूलाई, यूसुफलाई समेत, जिउँदै देख्‍नेवाला थिए! सबै कुराहरू उनको विरुद्धमा हुनुको साटो सबै कुराहरू उनकै भलाइका निम्ति काम गर्दैथिए (रोमी ८:२८ सित तुलना गर्नुहोस्)। आफ्ना कठिनाइहरूको बीचमा उनले यसरी भन्नुपर्नेथ्यो, “म बुझ्दिनँ, किन मलाई यस्ता कुराहरू आइपरिरहेका छन् तर मलाई विश्वास छ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ र उहाँले जसरी भए पनि यी सबैका बाबजुद पनि मलाई आशिष नै दिनुहुनेछ!”
यी दसजना दाजुहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई याद गर्नुपर्नेथ्यो! परमेश्वरको आशिष दिने प्रतिज्ञा याकूबका सबै छोराहरूका निम्ति थियो, यूसुफको निम्ति मात्र होइन! यदि यी दाजुहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास गरेका भए यूसुफप्रति उनीहरूको व्यवहार बग्लै हुनेथ्यो। त्यो बुझेका भए उनीहरूले यसरी भन्न सक्नेथिए, “यूसुफले विशेष कुराहरू पाइरहेका छन् (उत्पत्ति ३७:३) तरैपनि हामी यो नबिर्सौं, परमेश्वरको आशिष भनेको अब्राहाम, इसहाक र याकूबका सबै नै सन्तानहरूलाई हो। परमेश्वरले हामीलाई पनि आशिष दिनुहुनेछ अनि हामीले चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ, पर्खनुपर्छ। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ ठीक त्यही पूरा गर्नुहुनेछ।”
त्यस्तो दासत्वकै बीचमा पनि परमेश्वरले यस जातिलाई अति सुन्दर प्रतिज्ञाहरू दिनुभयो। प्रस्थान ६:६-८ पढ्नुहोस्। यी पदहरूमा “निकाल्नेछु” वा “गर्नेछु” वा “हुनेछु” वा “ल्याउनेछु” वा “दिनेछु” भन्ने प्रतिज्ञापूर्ण वचनहरू जम्मा कतिपटक पाइन्छन्? ________। के परमेश्वरले यी सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुभयो? परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई दासत्वको देशबाट प्रतिज्ञाको देशभित्र फर्काएर ल्याउनुभयो! प्रस्थानको पुस्तकले उनीहरूलाई मिश्रदेशबाट बाहिर निकालिएको घटनाको बयान गरेको छ भने यहोशूको पुस्तकले चाहिँ उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशभित्र प्रवेश गराइएको घटनाको बयान गरेको छ।
एउटा दानाको विचार गरौं। त्यो दानालाई जमीनमा रोपियो भने त्यो उम्रेर एउटा सुन्दर बोट बन्छ र धेरै फल दिन्छ। तर त्यो दानालाई काठको टेबुलमाथि वा कुनै त्यस्तै कडा सतहमाथि राखिछाड्यौं भने त्यसले कसैलाई कुनै फाइदा दिन सक्दैन। परमेश्वरको वचन त्यो दाना जस्तै हो। परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा गहिरो गरी रोपिनुपर्छ र हामीले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। मानौं तपाईंको बाबुले तपाईंलाई यसरी भन्नुभयो, “म तिम्रो जाकेटको खल्तिभित्र एक सय रुपैयाँ राखिदिनेछु अनि तिमी शहर जाँदा तिमीलाई खर्च गर्नलाई त्यो प्रयोग गर्न सक्नेछौ।” यदि तपाईंले त्यो कुरा विश्वासै गर्नुभएन भने तपाईं शहर पुग्दा त्यो पैसाले तपाईंलाई कुनै फाइदा दिन सक्नेछैन किनकि आफूसँग पैसा छ भनेर तपाईंले विश्वास गर्नुभएन भने उक्त पैसालाई तपाईंले खर्च गर्न पनि सक्नुहुन्न! बुद्धिमानी काम यो हो: बाबुले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नु, आफ्नो खल्तिभित्र हात हाल्नु, पैसालाई झिक्नु र त्यसलाई प्रयोग गर्नु!
एक व्यक्तिले गर्न सक्ने सबैभन्दा बुद्धिमानी काम यो हो — परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नु! के परमेश्वरलाई खुशी पार्ने अरू कुनै उपाय छ (हिब्रू ११:६)? _________।
“विश्वास भन्छ, परमेश्वरले आफ्नो वाचा पूरा गर्छन्
विश्वास भन्छ, मानिलिन्छु, अधिकार यो पाएँ भनी!”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 16:23:002020-04-28 14:32:54प्रतिज्ञाको प्रबन्ध
मानव शासनको प्रबन्धव्यवस्थाको प्रबन्ध